Zavamaniry hafakely | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Zavamaniry hafakely
Voninkazo Rafflesia: hahafantarana ny voninkazo lehibe indrindra
Ny voninkazo lehibe indrindra eran-tany, lehibe kokoa mihoatra ny 1 m ary ny lanjany 10 kg na mihoatra, dia antsoina hoe rafflesia. Ny zavakanton'ny parasitika tsy mahazatra dia hahagaga ny tantarany sy ny fomba fiainany. Fantaro azy tsara kokoa. Tantaran'ny fahitana Ity orinasa mahatalanjona avy any atsimo atsinanan'i Azia ity dia manana anarana maro hafa nomena azy avy amin'ireo mponina ao an-toerana - ny voninkazo, ny loto maty, ny lotus vato, ny lilia maty.
Hazo cucumber: singa fiahiana, fampiasana, fananana
Vitsy no nandre momba ny zavamaniry toy ny bilimbi, ary matetika no mihinana ny voankazo ho maina. Andeha hojerentsika ny misy azy sy ny toerana misy azy. Inona no atao hoe Bilimbi ary mitombo ny toetrany Bilimbi dia fambolena lavalava ao amin'ny fianakaviana Sour. Antsoina hoe hazo cucumber ihany koa izy io.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Zavamaniry hafakely